Iindaba zesiXhosa @11:00, 28 eyeNkanga – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa @11:00, 28 eyeNkanga
Written by Ashia Nkontsa on 28/11/2018
longeziwe Ityala lomdlwenguli enkantolo
Inkundla ephakamileyo yephondo leNtshona Koloni yongeze izityholo zokurhuqela isidima somntu eludakeni ngakumfundisi ojamelene namatyala amabini okubulala kwakunye namane okudlwengula. Umene lo utyholwa ngokugqithis’amafu iqabane lakhe elineminyaka engamashumi amathathu anesithandathu ubudala u-An-Niesa Bardien nowafunyanwa etyunyuzwe intloko ngembokotho kwakunye nokudlwengula ebulala uSharvonne Sharnice Koense oneminyaka engamashumi amabini ubudala nowafunyanwa ekrwitshiwe ngomnyaka ka2013. Lo mfundisi wommandla weeCape Flats ukwajamelene namatyala okudlwengula amanina amabini awawarhwebesha ngelithi uzakuwanika umsebenzi kananjalo nezityholo zokudlwengula ephinda-phinda owasetyhini awayedibene naye kwiqonga lonxibelelwano likaMxit. Inkundla yongeze elinye ityala emva kokuvela kweengxelo zokuba le nqeberhu yabelana ngesondo nowasetyhini eyayisebenza naye kwinkampani yokucoca yaza yenza ushicilelo lweVideo, yalubonisa abanye abasebenzi abane nto leyo iqandusele kwizityholo zokurhuqela igama lomntu eludakeni nanjengoko eqwabaze ilungelo lasekhusini lalowo wasetyhini.
uNdlozi uphefumle ngezigxeko zoonondaba abangenzi misebenzi ngendlela
Iqela leEFF lisikhabile isicelo sendibano senqwanqwa labahleli kwilizwe loMzantsi Afrika. i-Sanef ifuna ukungqubanis’iintloko ne-EFF ishukuxe iintetho ezifingis’iintshiyi zenkokheli yeli qela umnumzana Julius Sello Malema nezizigrogriso kwiintatheli. Ethetha ngeentatheli uMalema uxelele amalungu alombutho ukuba mawaqubisane nazo. I-Sanef ithi nangonanje ilihlonipha ilungelo likaMalema lokugxeka amajelo osasazo, ixhalabe ngamandla malunga nezigrogriso ngakwiintatheli ezithile ezithetha phandle malunga neendaba ezilaqazisayo ezigudle i-EFF. I-Sanef ithi indibano yayo neli qela ibilinyathelo lokuqala elibaluleke ngamandla ingakumbi njengokuba ilixa lolonyulo sele lifutshanisile. Ukanti, usomlomo weEFF kuzwelonke umnumzana Mbuyiseni Ndlozi uthi akukho lungu le-EFF lizakuhlasela iintatheli koko idabi labo lelengqiqo….NDLOZI 1….Uthi uninzi lweentatheli aluchola-choli zindaba koko lubhala izimvo zalo kwiphepha-ndaba…NDLOZI 2…
Mzansi Africa lilizwe lokuqala lokuvumela Iintengo zomgunyathi
Igqiza lophando nzulu i-Ipsos izolo ivakalise ukuba ilizwe lomzantsi
afrika lelokuqala ezimbalini ukuvumela ukuba imidiza yomgunyathi
ibeyeyona inentengo ephezulu. Oku kulandela kanye emveni kweengxelo
ezikhutshiweyo zokuba imidiza yakwa RG yeyona ithengise ukodlula
nayiphi na ekhoyo kuquka naleyo isemtethweni kweli. Kwingxelo ye-Ipsos
yakutshanje kuboniswe ukuba intengo yalemidiza yenyuke ngokungekho
ngqiqweni nangona bekukho umngeni wokuba inkonzo yerhafu kweli
ibibonakalisa ubuthathaka nalapho iye yenyusa intengo yezabelo
ngomyinge ongaphezulwana nje kumashumi mabini anesiqingatha eepesenti
kwiinyanga nje ezintathu.
Abahlali baseMitchell’s Plain bangaphulukana nezindlu zabo
Bazakulazi namhlanje ikamva labo abahlali abalishumi elinesibini baseMitchell’s Plain abajamelene nokukhutshwa emakhayeni abo kulandela ukuwa nganeno kwabo ukukhupha intlawulo yawo. Aba bathenga izindlu eziphantsi kwenkampani i-Cape Town Community Housing phakathi komnyaka ka2000 no2001 kwaye bekufanele benza intlawulo yanyanga nanyanga isithuba seminyaka emine, nalapho baye bamane bengahlawuli ngexa yezizathu ezahlukeneyo. Ezi zindlu ziye zathengiselwa abanye abantu baza bona banikwa iimbalelwano ezibatsibis’umgubasi. Kulo nyaka aba bahlali baye babhenela kwinkundla ephakamileyo yaseKapa besiya kucela umngceni eli nyathelo baza bafa namthanyana kwilinge labo. Ukanti namhlanje kulindeleke ukuba inkundla yomgaqo-siseko iwise isigwebo kule nyewe.
Omatoso ujonge inkundla enochitha amatyala akhe
Otyholwa ngokudlwengula nongumfundisi odal’iintetha welizwe
laseNigeria uTimothy Omotoso ufuna inkundla ephakamileyo yezibheno
ezinze eBloemfontein iwachithe amatyala olwaphulomthetho ajongene
nawo. Ngokweengxelo ezikhutshiweyo amagqwetha kaOmotoso eme entla
ngelithi amatyala atyatyekwa lomfundisi aliqela okunukuneza
ngokwesondo awanasihlahla koko angongwe yintiyo ngakuye. Kwelinye
icala uOmotoso uzithethelele ngelithi wayeseMelika ngethuba kusenzeka
ezoziganeko atyholwa ngazo, ukanti loka Omotoso ukwafuna nokuba isuswe
kwelityala ijaji eyongameleyo uMandela Makaula ngelithi unedolo
ngakwelinye lamangqina ombuso.
Gwede Mantashe nobudlelwane bakhe nabakwaGupta
Usihlalo kazwelonke kwiqela leANC umnumzana Gwede Mantashe ungqinile ukuba ukhe watyelela kwikhaya lakwaGupta eSxonworld eRhawutini amatyeli amabini esiya kushukuxa ukusekwa kwephepha-ndaba lolu sapho i-The New Age. uMantashe ebemele i-ANC phambi kwekomishoni kaZondo nalapho athe eli qela libambe iindibano neebhanka ezinkulu zeli lizwe lishukuxa ukuvalwa kweeAkhawunti zamashishini akwaGupta ngelixhalabele ukulahlekelwa kwabantu yimisebenzi. Kwimpendulo yakhe kwiintatheli okaMantashe uthi akazange wangqubanis’iintloko nabakwaGupta eyedwa koko udibele nabo njengonobhala weANC eLuthili House nangethuba umsasazi weendaba uVuyo Mvoko noKarima Brown beseka eli phephandaba baba nendibano nabo. UMantashe uthi ubungqina obuthiwa thaca phambi kwale komishoni abudali yantlukwano kwi-ANC kwaye uchasene neentetho zabo bagxibha le komishoni.
Impumelelo yeBanyana Banyana
Iqela le Banyanya lingenile kwindebe yehlabathi ye bhola ekhatywayo yamanina eza kubanjelwa eFrance ngo June ka 2019, oku kwenzeke emveni kokuba bebathe iqela leMali ngamanqaku u2-0 kwi semi final ye AWCON lonto ibathathe yababeka kwi final yele tumente abazakuyidlala neNigeria ngomhla wokuqala kuDecember
Loka Lebese ukhululekile ukuba angadlalela naliphi iqela
Iqela le Mamelodi Sundowns no George Lebese bafike kwisivumelwano sokuba lokaLebese angadlalela naliphi iqela afuna ukulidlalela ngokwe mboleko. Ucinga ntoni ngesisiGqibo?